रामकुमारी झाँक्रीको ओलीलाई मुखभरीको जवाफ - Baikalpikkhabar
रामकुमारी झाँक्रीको ओलीलाई मुखभरीको जवाफ
सुनसरी, २० भद्रौ / नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उपाध्यक्ष भीम रावलको चर्को आलोचना गरेकी छन् ।
ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा एमसीसी पास गर्न मरिमेटेर लागेको स्मरण गर्दै नेतृ झाँक्रीले अहिले त्यसको विरोधमा उभिएकोमा आक्रोश पोखिन् । शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित पार्टीको प्रथम नगर कमिटीको भेलामा बोल्दै उनले महाकाली सन्धिमा समेत राष्ट्रघात गरेका ओली र रावलले राष्ट्रवादलाई आफूलाई पायक पर्नेगरी व्याख्या गर्ने गरेकाले पनि नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढनु परेको तर्क गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘खड्ग ओली हिजो एमसीसी पास गर्न कन्दनी सुर्काएर लागि परेको मान्छे, आज एमसीसीको विरोध गर्दैछन् । कमरेड भीम रावल आज एमसीसीको विरुद्धमा जसरी बोल्दैछन् । मलाई सम्झना छ– ५३ सालमा यो भन्दा ठूलो राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएको थियो । भीम रावलको पोजिशन के थियो ? कमरेड खड्गप्रसाद ओलीको पोजिशन के थियो ? महाकाली सन्धिका बेला ।’
नेतृ झाँक्रीले ओलीको नेतृत्वमा रहेको एमालेको हालत सद्भावना पार्टीको जस्तै हुने टिप्पणी समेत गरिन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सत्यानाश बनाउने बाटोमा अघि बढेका ओलीले मुलुकलाई नै विघटनको दिशामा लैजाने प्रयास गरेपछि आफूहरुले सत्ताबाट हटाएको दाबी गरिन् ।
आइतबार, २० भदौ, २०७८, बिहानको ०८:४७ बजे